सोधेकै भरमा कोरोना नेगेटिभ भन्दै घर फर्काउँदै टेकु अस्पताल ! – Sidha Onlinepatra
मुख्य पृष्ठ /News/सोधेकै भरमा कोरोना नेगेटिभ भन्दै घर फर्काउँदै टेकु अस्पताल !
काठमाडौँ, २९ वैशाख । नुवाकोट शीतलबेसीकी सुनिता कार्की ८ महिनाकी गर्भवती छिन् । नियमित परीक्षण गराउन शुक्रबार काठमाडौं आइपुगिन् । बाटैबाट चाबहिलस्थित घरबेटीलाई फोन गरिन् । ‘घरमा आउन त आऊ तर, टेकुमा कोरोना परीक्षण गरेर मात्रै आऊ’ भनेपछि कोठामा नगई उनी सिधै टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्तपाल पुगिन् ।
आइतबार अस्पताल पुग्दा स्वाब संकलन गर्ने ठाउँमा दुई चिकित्सक परामर्शका लागि बसेका देखिए । उनीहरुले परीक्षण गर्न आउनको ज्वरो नाप्थे । कहाँबाट आएको, कसलाई भेटेका छन् र कहाँ–कहाँ जानुभएको छ जस्ता प्रश्न सोधेका आधारमा कोराना नभएको प्रमाणित गरिदिन्थे । यतिसम्म कि ज्वरो आएर अन्य अस्पतालले रेफर गरेका बिरामीको समेत परीक्षण गरिएको थिएन । याे खबर कान्तिपुर दैनिकमा छ ।
देउवासँग हात मिलाएर ओलीले दिए बधाई